Ngaba ngabafaki-sicelo mabafake i-imeyili ye-Grad School Professors?
Umbuzo oqhelekileyo abaninzi abafake izicelo zezikolo bacela ukuba ngaba kufuneka baqhagamshelane nabaprofesa abasebenza kwiiprogram ezithweswa iziqu apho bafaka khona. Ukuba ucinga malunga nokuqhagamshelana noprofesa onjalo, qwa lasela izizathu zakho.
Kutheni Abafaki-nxi beNxibelelwano nabaProfesa
Kutheni baqhagamshelana nabafundisi? Ngamanye amaxesha i-imeyli yezicelo zabafake izicelo kuba zifuna abanye abafake izicelo. Bathemba ukuba ukudibanisa "ku" kule nkqubo.
Esi sizathu esibi. Iinjongo zakho mhlawumbi zicaca ngakumbi kunokuba ucinga. Ukuba umnqweno wokufowunela okanye i-imeyli injingalwazi ngokumvumela ukuba azi igama lakho, musa. Ngamanye amaxesha abafundi bakholelwa ukuba ukudibanisa kuya kubakhombulula. Akusiyo isizathu esifanelekileyo sokunxibelelana. Ukukhunjulwa akusoloko kulungile.
Abanye abafake izicelo bafuna ulwazi malunga neprogram. Esi sizathu esibamkelekileyo sokunxibelelana ukuba (kwaye kuphela ukuba) umfaki sicelo uphando ngokucokisekileyo inkqubo. Ukwenza uqhagamshelwano ukubuza umbuzo onokulibaziseka ngokukhawuleza kwiwebhsayithi akuyi kukufumana amaphuzu. Ukongezelela, imibuzo ecacileyo malunga neprogram kwisebe lokungeniswa kwezidanga kunye / okanye umlawuli weprogram kunokuba i-faculty nganye.
Isizathu sesithathu isizathu sokuba abafaki-sicelo baqwalasele ukudibanisa nabaprofeti ukuba babonise umdla kwaye bafunde ngomsebenzi weprofesa. Kule meko, umnxibelelwano uyamkeleka ukuba umdla unyanisekileyo kwaye umenzi wesicelo wenze umsebenzi wakhe wesikolo kwaye ufundeka kakuhle kumsebenzi weprofesa.
AbaProfesa 'Thatha kwi-imeyile isicelo
Phawula le ngentla ngentloko: Abaninzi abaprofesa bakhetha ukudibana ne-imeyile, kungekhona ifowuni. Ubungqina obubizwa ngokuba nguprofestile akunakwenzeka ukuba kukho intetho eya kunceda isicelo sakho. Abanye abaprofesa bajonga iifowuni zibiza kakubi (kwaye, ngokulwandiswa, umenzi wesicelo unobungozi).
Musa ukuqhagamshelana nomnxeba. I-imeyile ibhetele. Inika iprofesili ixesha lokucinga ngesicelo sakho kwaye uphendule ngokufanelekileyo.
Ngokubhekisele ukuba ngaba uthintana nabo bonke ootitshala: Abangcali bootitshala baye baxubana kunye nabafaki zicelo. AbaNtshishophu bahluka ngokumalunga nomgangatho woqhagamshelwano abanabo nabafake izicelo. Abanye baxubusha ngokuzimisela abafundi nabafundi kunye nabanye. Abanye abafundisi bajonga ukuqhagamshelana nabafaki zicelo njengengathathi hlangothi. Abanye abafundisi bathi bangathandi ukudibanisa nabafakizicelo kangangokuthi babala imibala yabo imibala. Basenokukujonga njengemzamo yokwenza izinto. Oku kuyinyani xa abafakizicelo bebuza imibuzo engafanelekanga. Xa unxibelelwano lujolise kubasicelo kunye nokufumana ukwamkelwa kwazo (umzekelo, ukunika ingxelo ngeGAR izikolo , i-GPA, njl.), Abaninzi abaprofesa bayaxeka ukuba umfaki-sicelo uya kufuna ukubamba ngesandla ekupheleni kwesikolo . Kanti ezinye iiprofesa ziyakwamukela iimbuzo zombuzo. Umngeni uqikelela ukuba kwaye nini ukwenza uqhagamshelwano olufanelekileyo.
Nini ukwenza uQhagamshelwano
Qhagamshelana ukuba unesizathu esinyani. Ukuba unombuzo ocinge kakuhle nombuzo ochaphazelekayo. Ukuba uya kucela ilungu lesifundo malunga nophando lwakhe qiniseka ukuba uyazi into oyicelayo.
Funda yonke into malunga nophando lwabo kunye nomdla . Abanye abafundi abangenayo baqala ukudibanisa nabacebisi nge-imeyile njengoko behambisa isicelo sabo. Umyalezo wokuthabatha ukunyamekela ekunqumeni ukuba ngaba i-faculty ye-imeyile kwaye uqinisekise ukuba kungesizathu esihle. Ukuba ukhetha ukuthumela i-imeyile, landela ezi ngcebiso.
Uvumelekile okanye Usenokungayifumana Impendulo
Akunabo bonke abaprofestile baphendula i-imeyili kubafakizicelo-kaninzi kuba nje ibhokisi yabo yebhokisi engenayo ikhukhulayo. Khumbula ukuba ukuba awuva nto ayithethi ukuba amathuba akho esikolweni aphumelele. AbaProfesa abangaqhagamshelana nabafundi abanokuthi bahlala bexakeke ngenxa yokuba baxakeke beqhuba uphando lwabo nabafundi bamanje. Ukuba ufumana impendulo sibonga ngokukhawuleza. Uninzi lwaba profesa baxakekile kwaye abayi kufuna ukungena kwiseshoni eyongezelelweyo yeefowuni kunye nomenzi wesicelo.
Ngaphandle kokuba unento entsha yokongeza kwi-imeyile nganye ungaphenduli ngaphaya kokuba uthumele umfutshane umbulelo.
Amadoda aseMerika aseMerika kunye neNkqubo yoLwaphulo-mthetho
I-Humphreys Peak: Intaba ephakamileyo kunazo zonke e-Arizona